Fandehanan'ny rà mandriaka hemodialisis avo lenta ho an'ny orinasa sy mpanamboatra tokana | Sanxin
◆ Fitaovana fiarovana (tsy misy DEHP)
Ny fantsona dia vita amin'ny akora PVC ary tsy misy DEHP, miantoka ny fiarovana ny dialyity marary.
◆ rindrina anatiny fantsona malama
Mihena ny fahasimban'ny sela sy ny famokarana gel ao amin'ny rivotra.
◆ akora fitsaboana kilasy ambony kalitao
Fitaovana tena tsara, mari-pamantarana ara-teknika marin-toerana ary fampifanarahana bio tsara.
◆ Fahazarana mifanaraka tsara
Azo ampiasaina amin'ny maodelin'ny mpanamboatra isan-karazany izy io, ary azo ampanjifaina ny lalan-dra / tsipika ra, ary azo fidina ireo kojakoja toy ny harona fandosiranana sy ny setroka fampidirana.
◆ Volavola manana patanty
Pipe clip: Volavola ergonomika novaina ho an'ny fampisehoana fiasa mora sy azo antoka.
Vilany misy vano: ny lava-kazo anatiny misy ny vilany dia manena ny fiforonan'ny rivotra sy ny fampidiran-dra.
Atsofohy ny elatra fiarovana: miaraka amin'ny seranan-tsambo fitadiavana fomba telo hampihenana ny mety hitrangan'ny fanjaitra mandritra ny santionany na ny tsindrona, mba hiarovana ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy.
Hemodialysis Blood Circuits famaritana sy modely:
Teo aloha: Vovoka hemodialisis
Manaraka: Sivan'ny dialysate
Fanesorana ra sy fanamasinana ny ra
Fanadiovan-dra ao amin'ny vatana
Fitsaboana amin'ny fanadiovana rà